UMG School of IT , Yangon (သင်တန်းသား လက်ခံပြီ) – Rangoon – Rangoon – Burma – Educational – ပညာရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ | MoeMaKa Burmese News & Media
FaceBook တွင် တွေ့ရသည့် ကာတွန်းဆရာများ၊ စာရေးဆရာများ
ငြိမ်းချမ်းအေး - ၂၀၁၆ ဟာ ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီးအိုကြီးတွေရဲ့ ‘နှစ်’ ဖြစ်ရမယ်
>မာဆိုး - ထင်ရာူမင်ရာ ခဵစ်လိုႚေူပာတာ
ဗိုလ်ထက်မင်း - ဓါးတောင်နဲ့မီးပင်လယ်ကို ၂၁ပင်လုံ ဘယ်လို ကျော်ရမှာလဲ - အပိုင်း ၃
>Letters from Michigan - 17
ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် မောင်မိုးသူ
>Regime's Election Committe seems not ready for 2010 Election
>ူမန်မာ အမဵြိးသမီး ၃ ဦိးိုံင်ငံတကာ လူႚအခငြ့်အရေးဆု ရ
>Daw Suu update
>good opportunity for friends of new Rgn police chief
တူမောင်ညို ● “ခွဲထွက်ခွင့်” အပေါ်သဘောထား ဖခင်နဲ့သမီးအကြား ကွဲပြားခြားနားသလော
Show Ad (ကြော်ငြာများဆီသို့)
Phone: 09 45 3300 250
Location: Rangoon, Rangoon, Burma
R 1/B 6, Gyogone Avenue, West-Gyogone, Insein. Yangon
ယနေ့ Digital ခေတ်တွင် နယ်ပယ်အသီးသီး၌ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော Digital Marketer များ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် Digital Marketing & Web Technology ကို စိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ UMG School of IT နှင့် စင်္ကာပူ အခြေစိုက် CIO Academy Asia (CIOAA) အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်း၍ Digital Marketing နှင့် Social Media သင်တန်းများကို ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ (၃)ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
REGISTER CLOSING DATE - AUGUST 26TH 2016
ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်း (၄)ခုမှာ -
1. Facebook Marketing Course
2. Social Media for Retailers Course
3. SEO / SEM / PPC Marketing Course
4. Digital and Innovation Strategy Course
သင်တန်းများကို CIOAA မှ ဆရာများကိုယ်တိုင် လာရောက်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး CIOAA အသိအမှတ်ပြု Certificate ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
** Only 15 Students for each course **
သင်တန်းနေရာ - Building (14), 4th floor, MICT Park အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းရန် - 09 45 3300 250
This Ad has been viewed 31626 times.